अनुकूलन फ्लोर ज्याक निर्माताहरू र फ्लोर प्रसारण ज्याक बिक्रीका लागि | कोस्ट ज्याक
घर > पानी > भुइँ ज्याक
अलमल्ल जुलाईको सेटलाई तपाईंको फ्लोर ट्रान्स ट्रान्समिशन ज्याक बनाउँदछ। उपयुक्त jack बिना नै एक लिफ्ट गरिएको गाडीमा सवारी गर्नुहोस्।
अंकित RFAJ-3TQP एक-टन लिफ्ट क्षमताको साथ एक बहुमुखी-लिफ्टर हो। भारी स्टील निर्माण र छाप लगाइएको हाइड्रोलिकले ग्यारेन्टी ग्यारेन्टी गर्दछ, जबकि निर्मित सुरक्षा ओभरलोड भल्भले कर्मचारी र उपकरणलाई सुरक्षा दिन्छ। यदि तपाईंले गल्तिले जारलाई ज्याकको लागि भारी भारी पार्नुभयो भने, यो अचानक तपाईं मा पतन हुनेछ र तपाईंको दिन बर्बाद। भुइँमा हाइड्रोलिकक्स ज्याकमा बिस्तारै तल झर्नेछ। जहाँ तपाईं एक वाहन अन्तर्गत कहिले जानुहुन्न जुन ज्याक स्ट्यान्डमा सुरक्षित छैन, तपाईंको व्यक्तिगत सुरक्षा र तपाईंको सम्पत्तीको सुरक्षा कहिले पनि प्रश्नमा हुनुहुन्न, यदि तपाईंले दुर्घटनात्मक रूपमा ज्याकलाई ओभरलोड गर्नुभयो भने पनि।
नयाँ 2. बीमा कम फ्लोर ज्याक, हाम्रो उत्पादनहरूले सीई, जीएस पास गरेको छ& युरोपियन युनियनको टुरभ प्रमाणीकरण। हाम्रो उत्पादनहरूको गुणस्तर सही र भरपर्दो छ। तिनीहरू युरोपियन र अमेरिकी बजारमा पनि बेचिएका छन्। सबै उत्पादनहरूले इलेक्ट्रोस्टेटिक वातावरणीय संरक्षण पेन्टिंग र - 45 45 ° जलविद्युत तेल, ताकि तिनीहरू अत्यन्त चिसो क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कृपया हामीलाई इजान्ट हेर्नुहोस्। यदि हामी इन्टेन्ट छनौट गर्छौं भने, हामी अझ राम्रो र राम्रो गर्न जारी गर्नेछौं
EPONT मेकानिकल विभिन्न ईन्जिन क्रेन, भुई जैक jt, फ्लोर प्रसारण jack हो जुन अनुसन्धान, उत्पाद र बिक्रीको लागि एक निकायको विशेष उद्यम हो।1. हामीसँग योग्यताहरू छन्: हामीसँग औपचारिक योग्यता प्रमाणपत्र छ2. निर्माण टेक्नोलोजी: निरन्तर अनुसन्धान र नवीनताComber। ग्राहक सन्तुष्टि: सन्तोषजनक उत्पादन प्रदान गर्नुहोस्